बाबु त्रिपाठीकाे कविता : नदीहरू « News24 : Premium News Channel
बाबु त्रिपाठीकाे कविता : नदीहरू
समयलाई काखी च्यापेर
निरन्तर बगिरहेछन् नदीहरू ।
किनारा साक्षी छ
मान्छेको अन्त्य मृत्युजस्तै
नदीको पनि आफ्नै अन्त्य होला
तर, कहाँ गएर
थकाइ मार्छन् होला नदीहरू ?
खै देश बोक्ने भरियाको जस्तो !
चौतारो छ कि छैन नदीहरूको ?
नदीको जात छ कि छैन ?
नदीको धर्म छ कि छैन ?
अधर्मी छैनन् नदीहरू ।
साना नदीलाई अंकमाल गर्छन्
बोकेर जीवनका तानाहरू
पोखेर मनका बहहरू
आफ्नै जीवनको गीत
यात्रामा सुखदुःख बाँड्दै
नदीको सङ्लो मन
मन भनेको नदीजस्तै गहिरो हुनुपर्दछ ।
तर, दुःखको बेलामा
आँसुजस्तै जीवन बोकेर
तर, प्रीत लाउँछन्
फेरि गर्छन् यात्राहरू
फेरि मिसिन्छन् समुद्रमा ।
म बूढो माझीको कथा सुनिरहेको छु
गन्तव्यविहीन छैनन् नदीहरू ।
मणि लोहनीकाे कविता : नदीका चराहरु
मणि लोहनी मलाई एक्लै पारेर नहिँड ए ! नदीका चराहरु कुनै प्रिय दिन जूनको पैतालाले